Arrimaha Layaabka Dunida: Aabe Ilmihiisa Oo Maalin Kaliya Jira U Bilaabay Tababar Dabaasha Uu Ku Barayo | Hawraar
October 1, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Arrimaha Layaabka Dunida: Aabe Ilmihiisa Oo Maalin Kaliya Jira U Bilaabay Tababar Dabaasha Uu Ku Barayo
Aabe u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka yaabiyay dunida badankeeda, isla markaana go’aanka uu ka qaatay, ilma yar oo u dhashay sababay in warbaahintu qaada dhigto.
Aabahan oo lagu magacaabo simon Elwell, sodon jirna da’diisa lagu sheegay, waxa uu wiil u dhashay, maalin ka dib markii uu ifka yimi ku bilaabay tababar uu dabaasha ku barayo.
Wallow Simon uu yahay tababare carruurta bara dabaasha, haddana waxa dadka ka degi wayday, xiliga uu ilmihiisa ku bilaabay tababarka, taas oo xitaa uu ka hor mariyay, maryo ku qabashada iyo kabdhado barka ilmaha yar.
Simon ayaa aminsan in wiilka u dhashay ee Phoenix Elwell, tababarkani anfici doono, koriinkiisa jidheed iyo maskaxeed labadaba, waxaanu dabaal barista ku bilaabay, markii wiilkaas yari ifka joogay, 31-saacadood oo kaliya.
Ninkan ayaa sheegay in ilmaha lagu barbaariyo dabaasha, isla markaana xiliyada ugu horaysa ee uu soo dhasho, loo bilaabaa, aanu waligii ka cabsan biyaha, guulna ka gaadho, quusida iyo dabaasha biyaha, isaga oo tusaale u soo qaatay carruurta uu tababaro oo uu xusay inay dabaasha ugu kala wanaagsan yihiin sidii loogu kala hor bilaabay carruurnimadoodi.
Dad badan oo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta caafimaadka carruurta ka hawl gala ayaa aaminsan, in ilmuhu marka uu soo dhasho dabaasha iyo biyaha si fudud ula qabsan karo, waxaanay tusaale u soo qaataan, ilmo galeenka hooyadii ee intii uu caloosha ku jiray uu ku noolaa, oo ah mid aad ugu dhow biyaha.
Waxa kale oo dhakhaatiirtu sheegaan in ilmaha dhamaan xubnihiisu marka uu soo dhasho ay bilaabaan la qabsiga xaalada ka jirta dunida uu yimi, sidaa awgeed biyuhu waxa ay ka mid noqon karaan ayay ku doodayaan, meelaha ilmuhu sida fudud ula qabsan karo.
Warkan oo Ingiriisi ah Ka Akhriso Halkan